အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အရည်အသွေးပိုကောင်းသည့် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူများ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်ထုတ်ဝေမည်ဟု ကြေညာ ~ Myanmar Online News
အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အရည်အသွေးပိုကောင်းသည့် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူများ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်ထုတ်ဝေမည်ဟု ကြေညာ
6:53 PM ပြည်တွင်းသတင်း No comments
အသစ်ထုတ်ဝေမည့် ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ငွေစက္ကူပုံစံအား တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ - ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၀က်ဘ်ဆိုက်)
အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ရန် အရည်အသွေးပိုကောင်းသည့် ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူများကို အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်ထုတ်ဝေမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က စက်တင်ဘာ ၁၈ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။၂ဝဝ၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော ကျပ် ၅ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူ၏ လုံခြုံမှုအဆင့်အတန်း ပိုမိုမြင့်မားစေရေး၊ အရည်အသွေးပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် အသုံးပြု နိုင်မှုသက်တမ်း ပိုမိုရှည်ကြာစေရန်နှင့် အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် လုံခြုံရေးကြိုးပုံစံအသစ်၊ ရေစာအသစ်နှင့် ငွေစက္ကူ ၏မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်ကို ဗားနစ် (Varnish) အလွှာဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည့် ကျပ် ၅ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူကို ထုတ်ဝေမည်ဟု ကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
မူလ ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူ၏ မျက်နှာစာတွင် ဒေါင်လိုက်ထည့်သွင်းထားသော အကန့်လိုက်ဆစ်ပိုင်းပြီး မြှုပ်နှံထားသော လုံခြုံရေးကြိုးအစား အရောင်ပြောင်းလဲနိုင်သည့် လုံခြုံရေးကြိုးအသစ်ကို အကန့်လိုက်အဆစ်ပိုင်းပြီး ပြောင်းလဲထည့်သွင်းထားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးကြိုးအသစ်သည် ယခင် လုံခြုံရေးကြိုးအဟောင်းထက် အရွယ်အစားပိုမိုကြီး၍ အရောင်လည်း ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး ငွေစက္ကူကို ကြည့်သည့်အနေအထားပေါ်မူတည်၍ ကြိုး၏ အရောင်သည် ရွှေဝါရောင်မှ အစိမ်းရောင်းသို့ ပြောင်းလဲနိုင်ကြောင်း၊ ငွေစက္ကူ ၏ မျက်နှာစာဘက် လက်ယာဘက်အပိုင်းတွင် ပုံစံအသစ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည့် ဆင် ဖြူတော်ပုံရေစာပါရှိပြီး ငွေစက္ကူကိုဖုံးအုပ်ထားသည့် ဗားနစ်(Varnish) အလွှာသည် ပြင်ပမှ ရေခိုးရေငွေ့များ၊ အရည်များနှင့် အရောင်စွန်းထင်းနိုင်သည့်အရာများကြောင့် ငွေစက္ကူ၏ အရောင်းအသွေးနိမ့်ကျ၍ ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ကြောင်းကြေညာချက်တွင် ပါရှိသည်။
ယခုထုတ်ဝေမည့် ကျပ် ၅ဝဝဝ တန် ငွေစက္ကူ၏ ငွေစက္ကူအရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဌာန် နှင့် အရောင်သတ်မှတ်ချက်များမှာ မူလ ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူအတိုင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် လက်ရှိတရားဝင် လှည့်လည်သုံးစွဲလျက်ရှိသော ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူများသည်လည်း တရားဝင်ငွေအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု ဗဟိုဘဏ်က ကြေညာခဲ့သည်။
ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူ အတုများ နှင့် ကျပ် ၁ဝဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူအတုများလည်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ တာမွေမြို့နယ်တွင် ကျပ် ၁ဝဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူအတု ရှစ်ရွက်နှင့် ထုတ်လုပ်သည့် ကာလာပရင်တာများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်းနှင့် ယင်းသို့ ငွေစက္ကူအတုများ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပြီးနောက်တွင် ယခုကဲ့သို့ ကျပ် ၅ဝဝဝ တန်ငွေစက္ကူအား အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်ဟုဆိုကာ ငွေစက္ကူအသစ်များ ထုတ်ဝေမည်ဟု ကြေညာခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
► 2020 (4522)
ဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုး လွှတ်တော်နှင့် တိုးရတော့မလား . . .
တရားရုံးစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေး တရားလ...
ရှုပ်ပွနေတဲ့ အ၀တ်ဗီရိုကို အမြန်ဆုံးရှင်းလင်းပစ်နိုင...
ရွေးကောက်ပွဲစနစ် ခုနစ်မျိုး အနည်းဆုံးတင်ရန် သူရဦး...
ဘုရားအထက်က နေရင် ငရဲကျနိုင်ပါသလား
နိုင်ငံသားစိစစ်မခံသည့် ဘင်္ဂါလီအရေး ရခိုင်လူထုနှင့် ...
တရုတ်နိုင်ငံသားနှစ်ဦးကို ပြန်ပေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်သည...
တယ်လီနောဖြင့် ငါးနိုင်ငံသို့သာ ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သေး
ပျောက်ဆုံးနေသော ရဟတ်ယာဉ်ကို သုံးရက်ကြာသည့်တိုင် ရှ...
နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေဖြင့် အပြစ်တင်မစောရန် န...
ဒီမိုကရက်တစ် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းနေသည်
အတည်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်နဲ့ ဆက်ဆံရေးကိ...
ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လျှင် မိုဘိုင်းဖုန်း အသုံးပြုသူ ငါ...
ဂျီဟတ်ခြိမ်းခြောက်မှု သီရိလင်္ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များနှင့်...
အချစ်ဆိုတာ ရင်ခုန်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်လို့ ဖွင့်ဟလာတဲ့ ...
စောတိုက်ဂါးနှင့် KNLA-PC တို့၏လမ်းခွဲပျက်စဲခြင်းနေ...
အသက် ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ ထိုင်း မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် ...
တိုက်ပွဲများကြောင့် တပ်မတော်ကို အပြစ်မတင်ရန် ဦးရဲ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနဲ့ မြန်မာမှာ IS အတွက် လူစုသူ ဖမ်းမိ
တိုက်ပွဲတွေ ဘာကြောင့် ပြန်ဖြစ်လာသလဲ - စည်သူအောင်မြင့်
အွန်လိုင်းမှာ ဒိတ်လုပ်နေသူတွေအတွက် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့်...
ပယင်းမှော်တွင် KIA အဖွဲ့မှ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲသည်ဟု အ...
NCCT ဆိုတာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အားလုံးကို ကိုယ...
DKBA အဖွဲ့မှ စောဆန်းအောင်၏ တပည့်ဖြစ်သူတစ်ဦးထံမှ စ...
တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ပြိုင်ပွဲတွေကြောင့် တကယ်အရည်အချ...
ဆံပင်ညှပ်ဆရာတွေ အမြဲပြောလေ့ရှိတတ်တဲ့ မုသားစကား (၇)...
၀ိတ်ချတဲ့အလေ့အကျင့်ကို သင်ရပ်နားသင့်ပြီဆိုတာ သိသာသ...
DKBA တပ်များ ဆုတ်ခွာရန်နှင့် သိမ်းထားသည့် လက်နက်မျ...
ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီမှ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြ...
တယ်လီနော၊ အူရီဒူးနဲ့ MPT ဈေးကွက် ဘယ်လိုယှဉ်ပြိုင်...
Miss Asia Pacific World အဖွဲ့က မေမြတ်နိုး၏မိခင်ကို...
NLD ပါတီ ၂၆ နှစ်ပြည့် ကြေညာချက်နဲ့ သဘာပတိမိန့်ခွန်း
ကျားကြောက်၍ ရှင်ကြီးကိုးခဲ့သော်လည်း ရှင်ကြီးကြောင်...
တောင်တက်သမားနှစ်ဦးကို ရှာဖွေသော ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီး ပေ...
မြဝတီမြို့တွင် အစိုးရတပ်နှင့် ဒီကေဘီအေ တိုက်ပွဲဖြစ်
ကားပါကင်ကိစ္စစကားများရာမှ ပါတီဝင်တစ်ဦးနှင့် ဘောလုံ...
အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေ (သို့) တရေးနိုးပြန်အိပ်မရတဲ့ညတွေ...
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆုရှင်ခြောက်ဦး တောင်အာဖရိကနှ...
ကျိုက်မရောမြို့နယ်အတွင်း ခလရ (၂၀၈) မှ မော်တော်ယာဉ်...
၂၀၁၅ မှာ NLD ပါတီ လုံးဝ အပြတ်အသတ် နိုင်မယ်လို့ မထင...
မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်ခံရသော မြန်မာအလုပ်သမားများနှင့် ...
အရက်သောက်ခြင်းဟာ ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကို ပိုစေတာ
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆိုးလ်မြို့တွင် စက်တင်ဘာ ၁၆ရ...
U.A.E ရဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး လေသူရဲ နဲ့ IS စစ်သွေး...
တပ်မြေကို လိုသည်ထက်ပိုသုံးထား၍ ဒေသခံများနစ်နာ
ဆင်ပေါင်ဝဲမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ ၁၁ ရွာမှ လယ်ယာမြေ...
အမ်မာဝပ်ဆန်၏ ဝတ်လစ်စားလစ် ဓာတ်ပုံများ ဖွင့်ချပစ်မည...
မန္တလေးတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကို ထောက်ခံဆန္ဒပြ
ထိုင်း ဘတ် ၁ သန်းကျော်ပါအိတ်ကို ပိုင်ရှင်ပြန်အပ်တဲ...
FHM မဂ္ဂဇင်းက ရွေးလိုက်တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း sexy အဖြစ...
Sex ပြောင်းဖို့နဲ့ အသံပြောင်းဖို့အတွက် တစ်နှစ်လောက...
NLD က သူရဦးရွှေမန်းကို သမ္မတ အမည်စာရင်း တင်သွင်းမည်...
အာရှ ယူ-၁၉ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ MRTV တိုက်ရိုက်ပြမယ်
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ထူးချွန်ဆရာများ ပထမဆုံးအကြိမ်ဆုခ...
အပစ်ရပ်မူကြမ်းဆွေးနွေးပွဲ သုံးရက်မြောက်နေ့တိုင် တိ...
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရာထူး အပြောင်းအလဲလုပ်ရန်...
အကြမ်းဖက်သမားမှန်း မသိဘဲ အင်တာဗျူးခွင့်ပေးခဲ့သည့်...
သင့်ကောင်မလေးနဲ့ ဖုန်းပြောရတာ အဆင်ပြေစေမယ့် အချက်များ
အူရီးဒူး ဖုန်းပြောခ ပြန်လျှော့
မြန်မာဒီဇိုင်နာ ၂၈ ဦးရဲ့လက်ရာတွေနဲ့ ဖက်ရှင်ပြပွဲ
UNFC ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ထိခိုက်...
ဘယ်သူလဲ ဗိုလ်တိုက်ဂါး -စည်သူအောင်မြင့်
ယနေ့မှစတင်ကာ အော်ရီဒူးဖုန်းခေါ်ဆိုခများကို စက္ကန့်နှု...
ဆင်ဆာကြောင့် "မင်းပေးတဲ့အချစ်" ဒီဗီဒီ ထွက်ရှိမည့်ရ...
နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရ ဘင်္ဂါလီ ၄၀ ဦးကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိ...
ကာမဂုဏ်ကိုးသူ မိခင်ကြောင့် မြေစာပင် ဖြစ်ခဲ့ရသူ သမီ...
ဘာပဲစားစား သင့်ဗိုက်သားပြားချပ်နေအောင် ထိန်းသိမ်းဖ...
အမေရိကန်သမ္မတ အိမ်ဖြူတော်သို့ ဓားပါသော လူတစ်ယောက်ြ...
အထက်တန်းဘာသာသုံးရပ် မြန်မာသာသာဖြင့်သာ သင်တော့မည်
အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျောင်းများက ခွဲခြားကန့်သတ်နေမှု...
တော်ဂေါ်လီ နောက်ဆက်တွဲ - ဒဲ့ဒိုး (တောင်ငူ)
မြ၀တီမြို့တွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်၊ ဒီကေဘီအေ တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁...
တပ်မတော်နှင့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ တင်းမာမှုလေ...
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဂျီဟတ်ဝါဒကို စစ်ပွဲဆင်နွဲခြင်း
အတုအပပြုလုပ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် အရည်အသွေးပိုကောင်းသည...
လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲမရှိပါက ဒီမို...
ဗိုလ်မှူးကြီး တိုက်ဂါးကြေညာချက် KNU/KNLA ငြိမ်းချမ...
တောင်တက်သမားနှစ်ဦးကို ကူရှာမည့် အမေရိကန် တောင်တက်...
ကလေးနည်းပညာတက္ကသိုလ် စာမေးပွဲအဖြေလွှာများ ပျောက်ဆုံး...